Fiainana any Panghsang, tetezan-tany Shinoa any amin’ny faritr’i Wa any Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2019 11:42 GMT
Vakio amin'ny teny русский, বাংলা, Italiano, Română , Español, Ελληνικά, Esperanto , English
Sarin'i Panghsang jerena avy ety ambony. Sary sy fanazavana avy amin'i Myo Min Soe / The Irrawaddy
Tafiditra ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty ka navoaka eto amin'ny Global Voices indray ny lahatsoratra navoakan'i Myo Min Soe tao amin'ny The Irrawaddy, tranonkalam-baovao mahaleotena iray ao Myanmar.
Miorina ao amin'ny havoana atsinanan'ny Fanjakan'i Shan akaikin'ny sisintanin'i Shina-Myanmar, Panghsang no renivohitry ny Faritra Wa, faritra mahaleotena nankatoavin'ny Lalàm-panorenana ao Myanmar. Fonenan'ny vondrom-poko lehibe indrindra sady manana fitaovam-piadiana mahery vaika indrindra, United Wa State Army (UWSA) ao Myanmar io faritra io, ahitana miaramila miisa 30.000 sy vondrona fanampiny miisa 10.000, araka ny voalazan'ny Fanaraha-maso ny Fandriampahalemana ao Myanmar .
Tamin'ny volana Aprily, nankalaza ny faha-30 taona niorenany tao Panghsang ny tafika, nahitana andian-tafika nanao matso tao an-kianjan'ny tanàndehibe. Niorina tamin'ny taona 1989, nanao sonia fampitsaharana ny ady tamin'ny miaramilan'ny governemantan'i Myanmar tamin'izany— ny Vaomieran'ny Fanjakan-dalàna sy Famerenana amin'ny laoniny ny Filaminana— ny UWSA tamin'io taona io taorian'ny nisarahana tamin'ny Antoko Komonista ao Birmania. Nanangana ny Antokon'ny Fanjakana Mitambatra Wa sy ny Governemantan'ny Fanjakana Entim-bahoaka Wa ihany koa izy sady nanery ny Governemanta Iraisana mba hankatoa ny faritra misy azy ho fanjakana ao [anatin'i] Myanmar.
Na dia eo aza ny toerany misy azy izay any amin'ny faritry ny sisintanin'i Myanmar dia mety hihevitra ianao fa any Shina rehefa mandehandeha mitsangatsangana manodidina ny tanàna. Ny teny Mandarin no re ampiasain'ny ankamaroan'ny olona eny an'araben'i Panghsang. Mandravaka ny anoloan'ny fivarotana ireo litera Shinoa miaraka amin'ireo fandikanteny Myanmar sy Wa. Ny Yuan no sandam-bola nosafidiana ao an-toerana. Tsara kokoa ianao raha miditra amin'ny tambajotra Shinoa amin'ny feo fanairan'ny finday tsara . Misoratra amin'ny teny Myanmar sy Shinoa ny takela-by famantarana eny an-dalambe. Ny entana avy any Shina no mameno ny toeram-pivarotana.
Ny fandrosoany anefa no zavatra tena tsapa momba an'i Panghsang. Tsy araka ireo faritra be tendrombohitra manodidina azy ireo fa mitsoriaka amin'ny lalana malalaka sy vita tsara ny fiara SUV (4×4). Tsy tapaka ny famatsiana herinaratra ary miroborobo ny fanamboarana tranobe avo. Tsindraindray ihany vao manao fisafoana ny fiaran'ny polisy. Noho ny fianteheran'izy ireo tamin'ny vokatra opioma tany aloha dia miezaka ny miala amin'ireo vaninandro mangidy taloha ny mpitondra ao Wa ary nilaza fa ny fanafoanana ny zava-mahadomelina izao no laharam-pahamehana amin'izy ireo ary miasa amin'ny fingotra sy ny dite izy ireo ho solon'ny vokatra opioma. Mila fahazoan-dalana avy amin'ny manampahefana ao Myanmar sy Wa ny vahiny rehetra rehefa hitsidika ny faritra.
Ireto misy sary vitsivitsy avy ao Panghsang:
Fambolena dite ao Mai Mao. Sary sy fanazavana avy amin'i Myo Min Soe / The Irrawaddy
Trano fivarotana iray ao afovoan-tanànan'i Panghsang. Sary sy fanazavana avy amin'i Myo Min Soe / The Irrawaddy
Varotra ao Yuan, ny sandam-bola nosafidina ao Panghsang. Sary sy fanazavana avy amin'i Myo Min Soe / The Irrawaddy
Ny arabe ao afovoan-tanànan'i Panghsang. Sary sy fanazavana avy amin'i Myo Min Soe / The Irrawaddy
Miaramila mpiambina UWSA . Sary sy fanazavana avy amin'i Myo Min Soe / The Irrawaddy
Vavahadin-tsisintany mankany amin'ny faritra Wa hita avy aty amin'ny faritra Yunnan. Sary sy fanazavana avy amin'i Myo Min Soe / The Irrawaddy
Vavahadin-tsisintany mankany amin'ny faritanin'i Yunnan ao Shina. Sary sy fanazavana avy amin'i Myo Min Soe / The Irrawaddy
faravodilanitra ao Panghsang. Sary sy fanazavana avy amin'i Myo Min Soe / The Irrawaddy